Ogaden News Agency (ONA) – Maraykanka oo Joojiyay Hubaynta Kurdiyiinta Suuriya.
Maraykanka oo Joojiyay Hubaynta Kurdiyiinta Suuriya.
Posted by ONA Admin	/ November 26, 2017
Madaxwaynaha Maraykanka Donald Trump ayaa u sheegay dhigiisa Turkiga in Maraykanku uusan sii hubeyn doonin dagaalyahanadda Kurdiyiinta ee Suuriya.
Hadalkan ayaa sida laga soo xigtay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu uu Trump ku sheegay wada hadal dhinaca taleefanka ah oo ay labada madaxweyne yeesheen maalintii shalay. Sida uu sheegay Cavusoglu, Trump ayaa sheegay in uu bixiyay awaamiir cad cad oo ku aadan in aan la hubeyn karin kooxda YPG.
Waxaa kaloo uu soo xigtay madaxweynaha Maraykanka in uu yidhi – arrintan macno darada ah waxay ahayd in wakhti hore ay joogsato. Madaxweyne Erdogan iyo Trump ayaa sidoo kale ka wada hadlay iibsiga qalab milatari oo uu Turkigu ka soo iibsado Mareykanka, sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay Aqalka Cad habeenkii Jimcaha.
Trump ayaa u sheegay Erdogan in uu dib u habayn ku samaynayo taageerada milatari ee Maraykanku siiyo kooxaha ologga la ah ee Syria, laakiin warbixintu ma aaney carab dhabin YPG.
Maraykanka ayaa u arkay maleeshiyadani awoodda ugu wanaagsan ee dhinaca dhulka ah ee la dagaalami karta kooxda Daacish. Halka xukuumadda Ankara ay u tixgaliso dagaalyahanadi koox argagixisa ah oo xidhiidh la leh jabhadda gooni u goosadka ah ee Kurdiyiinta Turkiga.